Uhlalutyo olufutshane lomsebenzi kaCesar Vallejo | Uncwadi lwangoku
Umsebenzi wemibongo kaCesar Vallejo
Encarni Arcoya | | Ababhali, Imibongo
Umfanekiso - Wikimedia / Enfo
Vallejo Wayengomnye wababhali ababalulekileyo benkulungwane yama-XNUMX, kungekuphela kwilizwe lakhe, ePeru, kodwa nakwilizwe liphela elalithetha iSpanish. Wadlala iintlobo ezahlukeneyo zoncwadi, eyona ibalulekileyo yayiyimibongo. Ngapha koko, usishiyele iincwadi ezintathu ze Imibongo Ezi ziphawule ixesha, esiza kuzihlalutya kweli nqaku.
Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngomsebenzi wombongo walo mbhali ubalaseleyo, ke siza kukuxelela ngomsebenzi wakhe wemibongo.
1 Abaxeli abamnyama
3 Imibongo yabantu
4 Iminqweno yeCésar Vallejo
Abaxeli abamnyama ...
Incwadi Abaxeli abamnyama yayiyeyokuqala imbongi ukubhala. Uyenzile ngexesha le-1915 kunye ne-1918, nangona ingazange ipapashwe kude kube ngo-1919 kuba umbhali wayelindele intshayelelo ka-Abraham Valdelomar, into engazange yenzeke.
Ingqokelela yemibongo ngu yenziwe ngemibongo engama-69 yohlulwe yangamabhloko amathandathu ukongeza kumbongo wokuqala onesihloko "AbaHloli abaMnyama" ikwangulawo unika incwadi igama layo. Eminye icwangciswe ngolu hlobo lulandelayo:
Iipaneli ze-Agile, kunye nemibongo eyi-11 iyonke.
Iindidi, ezineenkondlo ezi-4.
Ukusuka emhlabeni, ngemibongo elishumi.
Imperial Nostalgia, eyakhiwe yimibongo eli-13.
Iindudumo, apho kukho imibongo engama-25 (yeyona bhloko inkulu).
Iingoma ezivela ekhaya, ogqiba umsebenzi ngemibongo emi-5.
Le ngqokelela yemibongo ebhalwe nguCésar Vallejo ibonelela ngo Indaleko yombhali ngokwakhe Kuba ezinye zezo mibongo zingqinelana ne-modernism kunye ne-classical metric and strophic form, oko kukuthi, kulandela umgca wento eyasekwayo. Nangona kunjalo, zikhona ezinye ezifanayo ngendlela yembongi yokuveza izimvo zazo kunye nokuba nenkululeko engakumbi xa uzicacisa.
Izihloko ezininzi ezahlukileyo zigutyungelwe, kubandakanya ukufa, inkolo, indoda, abantu, umhlaba ... zonke zivela kwimbongi yakhe.
Kuyo yonke imibongo ekule ncwadi, eyona idumileyo necazululwe yile inika umsebenzi igama, "Abaxeli abamnyama."
Trilce (Iileta ...
Incwadi kathathu Kwakuyinto yesibini ebhalwe nguCésar Vallejo kunye ngaphambi nasemva ngokubhekisele kwinto yokuqala. Ixesha apho kwakubhalwa khona, emva kokubhubha kukanina, ukusilela kothando kunye nehlazo, ukusweleka komhlobo wakhe, ukuphulukana nomsebenzi wakhe, kunye nexesha awalichitha entolongweni Imibongo eyinxalenye yencwadi yayimbi kakhulu, iimvakalelo zokukodwa kunye nobundlobongela kuyo yonke into awayeyiphile imbongi.
Le ngqokelela yemibongo yenziwe iyonke yimibongo engama-77, akukho namnye kubo onesihloko, kodwa linani lamaRoma kuphela, elahluke ngokupheleleyo kwincwadi yakhe yangaphambili, apho nganye nganye yayinesihloko kwaye yahlelwa ngokwamaqela. Endaweni yokuba, nge kathathu elowo uzimele omnye komnye.
Ngokubhekisele kubuchule bakhe bemibongo, kukho ikhefu ngento eyayisaziwa malunga nembongi. Kule meko, phuma kulo naluphi na ukuxelisa okanye impembelelo ebenayo, Uyazikhulula kwiimethrikhi nakwimvano-zandi, kwaye usebenzisa amagama anenkcubeko kakhulu, ngamanye amaxesha amadala, enza ukuba kube nzima ukuwaqonda. Ukongeza, wenza amagama, asebenzise amagama enzululwazi kunye namabinzana athandwayo.
Imibongo yeyakhe, bayalibalisa ibali kodwa ngaphandle kokuvumela umntu ukuba abone phantsi kwazo, ngokungathi kukrolwa umgca phakathi kwento uluntu oluyiyo nento ayiyo umbhali. Onke amava akhe ngexesha awabhala ngalo msebenzi abangela ukuba bazaliswe ziintlungu, unxunguphalo kunye nemvakalelo yokuchasana nabantu nobomi.
Imibongo yabantu: 137...
Emva kokuba efile, incwadi Imibongo yabantu Yapapashwa ngo-1939 iquka imibhalo eyahlukeneyo yembongi ukusukela ngo-1923 ukuya ku-1929 (imibongo kwiprozi) kwakunye nokuqokelelwa kwemibongo «Spain, yithathe le chalice isuke kum».
Ngokukodwa, Umsebenzi unemihobe engama-76, I-19 yayo eyinxalenye yemiBongo kwiProzi, enye indawo, eyi-15 ukuba ichaneke, kwingqokelela yemibongo yeSpain, ndithathe le chalice kum; kwaye enye iya kufaneleka kwincwadi.
Le ncwadi yokugqibela yenye yezona zibalaseleyo nguCésar Vallejo apho "iyunivesi" leyo umbhali ayifumene ngokuhamba kwexesha ibonwa ngcono kwaye wazigqwesa iincwadi zangaphambili ezapapashwa.
Nangona imixholo ajongana nayo uVallejo kwimibongo yakhe yaziwa ngendalo yakhe yangaphambili, inyani kukuba kukho umahluko kwindlela yakhe yokuveza izimvo zakhe, kulula ukuba umfundi aziqonde, ngokungafaniyo noko kwenzeka kuTrilce, umyalezo wakhe wangaphambili.
Nangona kwizicatshulwa kusekho i- intetho malunga nokungoneliseki kobomi ngumbhali, Ayisiyo "njengokuphelelwa lithemba" njengakweminye imisebenzi, kodwa ishiya intambo yethemba, ngokungathi ifuna ukuphembelela bonke abantu ukuze utshintsho kwihlabathi lube yinto edibeneyo hayi eyedwa. Ke, ibonisa ukukhohlisa ngehlabathi elidalwe ngendlela emanyeneyo kwaye esekwe eluthandweni.
Ukuba ngaphezulu kwesongezelelo semisebenzi emithathu eyahlukeneyo, Imibongo kwiprozi; Spain, thabatha le chalice kum; kunye nezo zihambelana Imibongo yabantu, inyani kukuba kukho umahluko omncinci phakathi kwabo, ukuqaqambisa uninzi ngokwahlukeneyo ngokweebhloko ekubhekiswa kuzo.
Iminqweno yeCésar Vallejo
Malunga nomfanekiso kaCesar Vallejo kukho izinto ezininzi ezinokuxelwa ngaye. Enye yazo yile le mbongi yayineenkolelo zonqulo kuba, bobabini utat'omkhulu notatomkhulu wakhe babenxulumene nenkolo. Owokuqala njengombingeleli waseMercedarian ovela eSpain, kwaye owesibini njengenkolo yaseSpain eya ePeru. Kungenxa yoko le nto usapho lwayo lwaluthanda inkolo, yiyo loo nto eminye imibongo yombhali yayinento yokwenza nenkolo.
Ngapha koko, umbhali kwakulindeleke ukuba alandele ekhondweni likatatomkhulu nomakhulu wakhe, kodwa ekugqibeleni wajika waba ngumbongo.
Kuyaziwa ukuba uVallejo noPicasso badibana izihlandlo ezininzi. Isizathu sokuba umzobi waseSpain kunye nomkroli enze imizobo emithathu nguCésar Vallejo asaziwa ngokuqinisekileyo, nangona i-intuited, ngamagama kaBryce Echenique, ukuba bobabini bahlangana eCafé Montparnasse eParis kwaye, nangona bebengazi Xa uPiccaso Emva kokuva ngokusweleka kukaVallejo, wagqiba kwelokuba athathe umfanekiso.
Kukho enye ithiyori, kaJuan Larrea, apho emva kokubhubha kwembongi, kwintlanganiso awayenayo noPicasso, wabhengeza iindaba kuye ukongeza ekumfundeleni eminye yemibongo yakhe, awathi kuyo umzobi wathi, Lo, ewe, Ndenza umzobo ».
Iimbongi kunqabile ukuba zibe ngumthombo wokhuthazo lweemovie. Nangona kunjalo, okufanayo akwenzeki ngoCesar Vallejo owayenebhongo lokukhuthaza, ngombongo wakhe "Ndikhubekile phakathi kweenkwenkwezi ezimbini", la Imuvi yaseSweden Iingoma ezivela kumgangatho wesibini (ukusuka ku-2000), apho kusetyenziswa iikowuti kunye namabinzana avela kulo mbongo.
Ukongeza, umboniso bhanyabhanya uphumelele iBhaso eliKhethekileyo leJury kwiCannes Film Festival.
Nangona uVallejo esaziwa kakhulu ngemibongo yakhe, inyani kukuba wayedlala phantse lonke uhlobo loncwadi kwaye ubungqina bokuba amabali, iinoveli, izincoko, imidlalo, amabali ziyagcinwa ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » Umsebenzi wemibongo kaCesar Vallejo
UJulio Gallegos sitsho
UVallejo ngokungathandabuzekiyo wayengoyena mbongi ubalulekileyo wexesha lakhe. Ingqokelela yemisebenzi yakhe yimizekelo yexesha lethu.Ingasetyenziselwa ukuqhelanisa nexesha lethu elinzima lezoqoqosho.
Phendula uJulio Gallegos
Iincwadi ezishelufini. Amabali kunye nababhali bezolo, namhlanje nangonaphakade